समलिंगी रग्बी विश्वकपमा पहिलो पटक महिला समुहले पनि भाग लिने
काठमाडौं (पहिचान) जेठ २८ – नेदरल्याण्डमा हुन गईरहेको समलिंगी रग्बी विश्वकपमा पहिलो पटक महिला समुहले पनि भाग लिने भएका छन् । नेदरल्याण्डको एम्स्टरडममा हुन गईरहेको बिघंम कप (रग्बी विश्वकप) मा चार महिला समुहहरुले पनि भाग लिने भएका हुन् । सन् २००२ मा सुरु भएको बिघंम कपको ईतिहासमै पहिलो पटक महिला खेलाडीहरु प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन लागेका हुन् ।
स्वीडेन, क्यानडा, नेदरल्याण्डका गरी तीन महिला समुह प्रतियोगितामा हुनेछन् भने चौथों समुह विश्वभरीबाट छनौट गरी तयार गरिएको छ । प्रतियोगितामा करिब २ सय खेल हुनेछन् । प्रत्येक महिला समुहले कम्तिमा ३ खेल खेल्नेछन् । महिला समुहको फाईनल भने आउँदो शनिबार दिउँसो हुनेछ ।
के हो समलिंगी रग्बी विश्वकप (बिघंम कप ?
मार्क केन्डल बिंघम स्मृति कपले जानिने यो प्रतियोगिता एलजिबिटी र रग्बी क्लबहरुको विश्वस्तरीय प्रतियोगिता मानिन्छ । बिघंम कपलाई गैर–भेदभावपुर्ण खेलका रुपमा बढावा दिन महत्वपुर्ण प्रतियोगिताका रुपमा लिने गरिएको छ । रग्बी खेलाडी मार्क बिघंमको नामले नै यो प्रतियोगिताको नामाकरण गरिएको हो । यो प्रत्येक दुई÷दुई बर्षमा हुने गर्दछ ।
पछिल्लो पटक कहाँ भएका थियो बिघंम कप ?
स्यान फ्रान्सिस्को, अमेरिका– सन् २००२
लण्डन, युके– सन् २००४
न्युयोर्क, अमेरिका– २००६
डब्लिन, आयरल्याण्ड– सन् २००८
मिन्निपोलिस, अमेरिका– २०१०
म्यानचेस्टर, युके– सन् २०१२
सिड्नी, अष्टे«लिया– सन् २०१४
नोशभिल्ले, अमेरिका– सन् २०१६